SOHEDA waa jimciyad ka shaqaysa waxbarashada iyo hormarinta bulshada. Waxana ay si gaar ah u bartilmaameedsataa bulshada aadka u liidata ee la kulanta dhibaatooyinka gaarka ah sida takoorka haybta ku dhisan, saboolnimada iyo arrimaha kale ee dadkaas ka sooci kara qaybaha kale ee bulshada.
Jimciyaddan waxa ay ka shaqaysaa sidii fursado waxbarasho iyo daryeel nololeed loo siin lahaa caruurta kasoo jeedda bulshadaas la takooro, si ay taas u ogolaato in bulshadaas loo suurtagaliyo riyooyin laga yaabo in aanay xaqiijintooda marnaba horay ugu tala galin, sida in ay caruurtoodu helaan dhammaan heerarka waxbarashada oo markaas ka dibna wax ula qaybsadaan asaagooda, iyaga oo naftooda iyo qoysaskoodaba u hubin kara nolol horumarsan.
Waxa ay SOHEDA howlaheedan wax barista caruurta kasoo jeedda dadka hayb ahaan loo takooro ama saboolka ah u aragtaa tallaabo lagu yarayn karo ama looga hortagi karo in caruurtaas ay mustaqbalka dhaw ku biiraan kooxaha ka shaqeeya amni darrada iyo dhibaatooyinka kale ee bulshada loo gaysto.
Jimciyaddu waxa ay shaqooyinkeeda qabataa iyada oo ku howlgalaysa xeerar u degsan iyo akhlaaq la jaan qaadaysa sharciyada caalamiga ah ee lagu hago howlaha samafalka, waxana ay SOHEDA iskaashi la leedahay sama-falayaal isugu jira ururro, hay'ado, iyo shakhsiyaad hanti haysta oo diyaar u ah gacan ka gaysashada dadaaladan wax lagu barayo caruurta danyarta ah.